Vavaka mba handeha tsara ny zava-drehetra. ? Any am-piasana sy fitsapana.
Ny vavaka mba handeha tsara ny zava-drehetra any am-piasana na amin'ny fotoam-pitsapana dia tena asan'ny finoana izany.
Matetika no inoana fa fihetsika tsy manaitra izany na mampiseho fahalemena na tsy fahaizana manao zavatra eo amin'ny tenantsika, fa tsy marina izany amin'ny kely indrindra.
Ny ilana fanampiana avy amin'Andriamanitra dia mampiseho fa olona araka ny fanahy isika ary tianay ny tsirairay amin'ny raharaha izay miahiahy antsika na satria hanomboka orinasa vaovao isika.
Ny tena tsara indrindra dia ny manao io vavaka io intelo isanandro isan'andro, azonao atao ny manitatra izany andro ilainao izany.
Mety ho ampy afa-tsy telo andro fotsiny izy na ny fangatahanao mety mitaky andro vitsivitsy bebe kokoa.
Ny marina dia ny hany fepetra takian'ny vavaka mba hahomby dia ny finoana izay nanaovana azy.
1 Vavaka mba handeha tsara ny zava-drehetra - Tanjona
1.1 Ny vavaka mba handeha tsara ny zava-drehetra
1.2 Ny vavaka mba handeha tsara amin'ny zava-drehetra ny fitsapana
1.3 Ny vavaka mba handeha tsara ny zava-drehetra
2 Hafiriana no ataon'ilay vavaka?
Vavaka mba handeha tsara ny zava-drehetra - Tanjona
Mazava ny tanjon'ity fehezanteny ity ary azo ampiasaina amin'ny tranga rehetra mety.
Matetika dia manomboka tetikasa vaovao isika izay tsy zato isan-jato no antoka fa mbola te hiezaka ihany isika, satria amin'ireny tranga ireny dia vavaka Zava-dehibe.
Ny fangatahana an'Andriamanitra fitarihana amin'ny zavatra ataontsika na ho azy hanampy antsika hanao zavatra tsara sy tsara dia zava-dehibe.
Ny ezaka vaovao dia afaka ihany koa eo amin'ny sehatry ny fampianarana, izay mahasoa ny sitrapon'Andriamanitra hatrany.
Na azontsika atao ny mangataka ny hoe ilay fara tampony indrindra dia manampy antsika hanohy fifandraisana izay tampotampoka tsy misy faniriana.
Raha tsy izany, dia azo ampiharina amin'ny tranga maro io vavaka io mba ho tsara ny zava-drehetra.
Azo atao miaraka amin'ny fianakaviana manontolo ary noho izany fomba izany, rehefa miara-mangataka ny tanjona iray ihany isika, dia lasa mahery vaika kokoa ny vavaka.
Tsarovy fa ny tenin'ANDRIAMANITRA dia milaza fa raha misy roa na telo miombona ary mangataka amin'Andriamanitra dia homeny ny fangatahana natao izy.
“Ry Andriamanitra ô, mangataka aho fa rehefa miditra amin'ny asako ianao, dia miantso ny fanatrehanao aho, mba hisaotra anao amin'ity andro vaovao omenao ahy ity. Miangavy anao aho fa andro fiadanana sy feno ny fahasoavanao, ny famindram-ponao ary ny fitiavanao ary ny zava-drehetra mitranga araka ny drafitra tonga lafatra.
Androany dia mangataka aho mba ho tanterahana ny tetik'asa rehetra, ny hevitro ary ny zava-bita kely indrindra amin'ny fiainako sy ny asako dia tafiditra ao amin'ny fijoroanao ho vavolombelona be voninahitra.
Ry Jesosy Tompo ô, tahio ny asako, ny filako, ny mpanjifako, ny mpiara-miasa amiko ary ny olona rehetra manao ity orinasa ity hiroborobo.
Ry Ray any An-danitra, havaozy ny sitrapoko sy ny heriko hanatanterahana ny asako amin'ny fomba tsara indrindra.
Androany, manentana fo tsara aho hanompo ny mpanjifako sy mpiara-miasa amiko amim-pahalemem-panahy. Tompo ô, omeo ahy ny voky mitsiky, ny saina tsara sy maso izay manome lanja ny zavatra rehetra hitan'ny manodidina anao.
Fadio ny teny manafintohina avy amiko ary mahatonga ahy ho olona mahay.
Omeo tanana roa aho hiasa manaja ny ankohonako, omeo zotom-po hitsangana aho isan'andro.
Tompo ô, tariho aho amin'ny fotoana rehetra hahatsapako fa very ny avaratra, ho heriko sy herim-po, omeo fo mahery aho tahaka anao.
Andriamanitra Ray any An-danitra, ataovy ho ny tsara indrindra anio
Misy tontolo iainana na fanamby asa vaovao izay tsy isalasalana fa mitaky fanampiana fanampiny amin'ny vavaka.
Mangataha mandeha tsara ny zava-drehetra Fa vavaka no atao an'io azo atao isan'andro izany, talohan'ny nandaozana ny trano.
Ny fomba amam-panao tsara azontsika ampiharina ao an-trano dia ny mivavaka vavaka iray isan'andro alohan'ny handaozany ny olona rehetra ao an-trano amin'ny maraina.
Amin'izany fomba izany no anampianay ireo ankizy kely na ireo osa amin'ny finoana mba hatoky bebe kokoa amin'ny herin'ny vavaka.
Ny vavaka mba handeha tsara amin'ny zava-drehetra ny fitsapana
“Ry mpitsara malala, zanak 'i Mary, enga anie mba tsy ho taitra ny vatako na ny ra nalatsako. Eny, ny tananao no mitazona ahy.
Ireo izay te hahita ahy dia manana maso ary tsy mahita ahy, raha manana fitaovam-piadiana izy ireo dia tsy mandratra ahy ary tsy mitarika ahy amin'ny tsy fahamarinana.
Nofehezina tamin'ilay lamba nandrakotra an'i Jesosy izao aho izao, mba tsy handratra na hamonoana ahy ary tsy handao ny fonjan'ny fonja aho. Amin'ny alàlan'ny fidiran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Ny fiatrehana ny fitsarana ara-dalàna dia fotoana iray tena ilaina sy manahy izay ahafahana mivavaka amin'ny zava-drehetra mandeha tsara.
Ny fahafahanao mamita ny angovo ratsy ary afaka mampifanaraka ireo zavatra tsara ao anaty tontolo izay ijerena izay rehetra voalaza sy atao dia ny famonjena antsika irery ihany.
Afaka mivavaka mialoha sy mandritra ianao ny fitsaranaFihetsika izay hanampy antsika hihavana sy handray fanapahan-kevitra tsara.
Ry Jesosy ô, Ianao no Teny marina, Ianao no Fiainana sy Fahazavana, Ianao no làlanay, Jesosy Tompoko malalako izay nilaza hoe: «Mangataha dia homena ianao, mitadiava dia hahita ianao, mandondona ary hosokafana ho anao, »ho an'ny fanelanelanana nataon'i Maria Reninao Masina, miantso aho, mitady aho, mangataka aminao aho amin'ny fanantenana lehibe fa hanome ahy izay ilaiko maika ianao: (Lazao izay tianao hotanterahina). Mivavaha telo ny Rainay, ny telo Hail Marys ary Voninahitra telo.
Ry Jesosy ô, Zanak'Andriamanitra velona ianao, vavolombelon'Andriamanitra mahatoky ianao el tontoloAndriamanitra miaraka aminay ianao, Jesosy Tompon'ny Tompo, izay nilaza fa "Na inona na inona no angatahinao amin'ny Ray amin'ny anarako dia homeny anao izany" tamin'ny alàlan'ny fanelanelanana nataon'i Maria, ny Reninao Masina, dia mangataka am-panetrentena aho amin'ny foko rehetra amin'ny Ray amin'ny finoana lehibe ny anaranao mba hanomezanao ahy izao tombontsoa izao izay hitako fa sarotra ny mahazo amin'ny alàlan'ny fahalemeko: (Avereno atao amin'ny fanantenana antenao izay ho azonao. Mivavaha telo ny Rainay, ny telo Hail Marys ary Voninahitra telo.
Ry Jesosy ô, Zanak'i Maria ianao, ianao dia mpandresy ny ratsy ary FAHAFATESANAIanao no fiandohana sy fiafarana, Jesosy, Mpanjakan'ny Mpanjaka, izay nilaza hoe: "Handalo ny lanitra sy ny tany, fa tsy ho lany ny teniko" amin'ny alàlan'ny fanelanelanana nataon'i Maria, ny Reninao Masina, mahatoky tanteraka aho fa hitalaho mafy omena: (Lazao amin'ny fanoloran-tena lehibe indray ny fangatahana).
Alohan'ny hidirana ao amin'ny efitrano fandidiana dia misy foana ny tahotra eo amin'ny tsy fahafantarana izay mety hitranga, izany no antony hanaovana ny vavaka mba hahalasa ny fandidiana sy ny fizotran'izay rehetra.
Ny ankasitrahana indrindra ataovy io vavaka io miaraka amin'ny marary alohan'ny hidirana ao amin'ny efitrano fandidiana, dia tsy maintsy mangataka tsara ianao ary mizotra mivantana amin'izay tiantsika ho jerena.
Amin'ny farany, tsara raha misaotra, noho ny fomba fampitana angovo tsara izay manan-danja amin'ny fizotran'ny fahasalamana rehetra.
Hafiriana no ataon'ilay vavaka?
Ny vavaka dia tsy misy fe-potoana voafaritra.
Raha ny mahazatra dia miankina amin'ny toe-javatra ihany dia mety mila minitra vitsivitsy na vitsivitsy ora anaovana izany.
Ny zava-dehibe dia azonao antoka fa hihazakazaka tsara ianao.
Amin'izany fomba izany ny vavaka mba hivoatra tsara ny asany rehetra, hiasa haingana ny fitsarana sy ny fiasa ary mahomby.
Miaraha mandeha amin'Andriamanitra.